हरिवंश र दिपक राज गिरी सम्धि!!! (फोटो र भिडियो सहित) - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
हरिवंश र दिपक राज गिरी सम्धि!!! (फोटो र भिडियो सहित)
१८ असार,२०७४ | Forsee Network
हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यका कान्छा छोरा मोहित वंश आचार्य यहि असार १७ गते वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छन् । गत वर्ष ईन्गेजमेन्ट गरेर विवाह गर्ने पक्का गरेका मोहितले पारिवारिक जमघटमा विवाह गरेका हुन् । असार १७ गते विवाह गरेका मोहितले असार १९ गते आर्मि अफिसर्स क्लबमा विवाह भोज कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छन । विवाह भोजमा आफन्त र केही निकट साथी भाईहरुलाई निम्ता दिईएको जानकारी छ । मोहीतको विन्दु थापासँग लगनगाँठो कसिएको हो ।
उता अर्का कलाकार दीपक राज गिरीले त छोरा दीवस गिरीको विहेको खबरै नदिई सुटुक्क बुहारी भित्र्याएका छन् । दीपकले पनि असार १७ गते नै छोराको विवाह गरिदिएका हुन् । दीपकका छोराको विवाहमा आफन्त र केही निकट कलाकारहरुलाई मात्र निम्ता दिईएको थियो । दीवसको विवाहको प्रिती भोज असार २२ गते राखिएको छ । दीवसको विवाह गुल्मीकी मिरा ज्ञवालीसँग भएको हो ।